Kufa uye Pestle, Pestle Uye Kufa, Marble Tray - Kingway
Simbi Iron Enamel Skillet
Cast Iron Yakatangira Cookware
Cast Iron Vakasarudzika Casserole
Simbi Iron Camping Cookware
Kanda Iron Chirahwe
Cast Iron Yakatemerwa Fry Pan
Cast Iron Yakagadziriswa Skillet
Granite Inofa uye Pestle
Marble Mota NePestle
Zvimwe Zvigadzirwa zveMabwe
Yakanakisisa Flat Pan
Kwechinwiwa kana Chidyo
Shijiazhuang Kingway Imp. & Exp. Co, Ltd yakavambwa muna 2 0 0 8 uye iri mune shijiazhuang guta, hebei mudunhu, China, iyo yekufambisa iri nyore uye nharaunda yacho yakanaka. Yedu yekudyara fekitari inovhara nzvimbo yemakumi matatu nemaviri emamirimita mativi uye ine vashandi makumi masere nevaviri. Kune mana mana ekugadzira mitsara seDISA kukanda, preseasoning, enamelling.
KUKOSHA & KUPENYU ZVAKAWANDA DZESHURE
Dutu uye Pestle
Yakakwana yekupwanya zvese zvinonhuwira uye kugadzira zvinonhuwira zvinosanganiswa. Yakanakira kusanganisa uye kushandira guacamole-kana kugadzira pesto uye mamwe masosi akaora.
Yakakwana pakubika uye yekushandira mumwe munhu zvikamu zvemiriwo, mativi, uye dhizi, Inopa isina kuenzaniswa kupisa yekuchengetedza uye kunyange kupisa; zvivharo zvisimbiso mukuravira uku zvibato zvichitendera kuti zvive nyore kutakura
DZINOGONA KUSVIRA ZVESE
Chishongedzo: yemarble yemusango kana granite Kurema: 20x15x3cm Kutakura: chipo bhokisi kana brown brown bhokisi Marble kana granite tray • Yakakwana kushandisa kwe pastry bhodhi • nyore kuchenesa. • chimiro uye saizi yakagadzirirwa. • yakachengeteka chikafu chekudyidzana uye isu tine iyo LFGB uye FDA mushumo.
Chishongedzo: Natural marble Kukura: dia.13cm, kureba 8cm Kutakura: zvipo bhokisi kana brown brown bhokisi Marble Mortar uye Pestle • Yakakwana yekupwanya zvese zvinonhuwira uye kugadzira zvinonhuwira zvinosangana. • Yakanakira kusanganisa uye kushumira guacamole-kana kugadzira pesto uye mamwe masosi akaora. • Mutsetse nemashizha lettuce kushandisa sese-chinangwa chinoshanda ndiro. • Yakaomeswa yemukati yemukati weduri inobatsira kupwanya uye kusaga zvinongedzo. • Yakakurisa pestle inoita basa rako kwauri, ichinyatsogadzira kugeda, kusanganisa uye kusanganisa.
Chishongedzo: yemarble yemusango kana granite Chikuru: 43x30x1.5cm Kutakura: chipo bhokisi kana brown brown bhokisi Marble kana granite yekucheka bhodhi • Yakakwana yekucheka kana kubatira mhando dzese dzekudya. • nyore kuchenesa. • chimiro uye saizi yakagadzirirwa. • yakachengeteka chikafu chekudyidzana uye isu tine iyo LFGB uye FDA mushumo.
Cast Iron Yakatemerwa Chirahwe
chigadzirwa zita cast iron reversible griddle diimita 43x23cm kureba 1.5cm kubatika preseasoned kurongedza brown bhokisi kana ruvara bhokisi logo yakagadziriswa chimiro Superb kupisa kuchengetedza ichidziya Inokodzera kune ese stovetops Yakakwana yekubika uye kushumira imwe yega mimwe miriwo, mativi, uye dhiziri Inopa isina kuenzana kupisa kuchengetedza uye kunyange kupisa; chivharo chisimbiso mukuravira nepo machero achibvumidza kutakurwa nyore kweFDA yakatenderwa pre-nguva yekukanda simbi inobvumira kuti ishandiswe nekukurumidza Inogona kunge uri ...
chigadzirwa zita cast iron mini casserole ine lid dhayamita 10cm, 26cm kureba 5cm, 11.5cm kubatika preseasoned kurongedza brown bhokisi kana ruvara bhokisi logo yakagadziridzwa chinhu Superb kupisa yekuchengetedza kupisa Inokodzera kune ese stovetops Yakakwana kune ese ekubikisa uye kushumira vamwe zvikamu zvemiriwo, mativi, uye dhiziri Inopa isina kusarudzika kupisa kuchengetedza uye kunyange kupisa; chivharo chisimbiso mukuravira nepo machero achibvumidza kutakurwa nyore kweFDA kwakabvumidzwa pre-nguva yekukanda simbi ichitendera ikozvino ...
Item Nhamba KAR26 Round Casserole D: 21.5cm 24cm 26cm 28cm Oval Casserole 28x21cm 30x23cm Zvinyorwa Stainless simbi knob uye loop inobata kuti hukuru kudzora color tsvuku, yero, bhuruu, yepingi, dema, machungwa enating enamel kubatisa 1.Heavy-basa enamel kubatisa 2. Yepamusoro kupisa kupatsanurwa uye kuchengetwa 3.Cast simbi heats zvishoma uye zvakaringana 4.Per akakwana kuti zvishoma zvishoma kubheka Zvimiro: Stainless simbi banga uye chiuno inobata kutonga kukuru Smooth girazi pamusoro haingatende kune zvinoshandiswa Prof ...
No. 505 Chikamuri, Zhongyuan Chivakwa, Nhamba368 Youyi North Street, Shijiazhuang, Hebei Pro, China